सडकसँग जोडिएको विकास – Sajha Bisaunee
सडकसँग जोडिएको विकास
धुलियाविट–भेडाबारी सडकको वि.सं. २०३६ सालमै ट्रयाक खोलिएको थियो । जिल्लाकै पुरानोमध्येको सडक अहिले पनि ट्रयाक खोल्दाकै अवस्थाको जस्तो छ । कच्ची र जीर्ण सडकका कारण यस क्षेत्र आसपासका बासिन्दाले दशकौंदेखि सास्ती खेप्दै आएका छन् । यो रुटमा बर्खामा सडक हिलाम्मे हुन्छ भने हिउँदमा धुलाम्मे । पछिल्लो समय भने यसको सुधार हुने संकेत देखिएको छ । सडक निर्माण थालेको चार दशकपछि मदन भण्डारी राजमार्ग नामाकरण गरी सुधारको काम अघि बढेको हो । सडक स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न भए यहाँ बाह्रै महिना यातायात सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस क्षेत्रमा वीरेन्द्रनगर, लेकवेशी र गुर्भाकोट नगरपालिकाका भू–भाग पर्दछन् । राजमार्ग अन्तर्गत ३५ किलोमिटर क्षेत्र पूर्वी सुर्खेतमा रहेको छ । यो खण्डमा नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने छैन । पहिल्यै बनेका सडकलाई जोडेर स्तरोन्नति गरिने भएको हो ।
मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सुुर्खेतको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने सडक स्तरोन्नति थालिएको छ । धुलियाविट–भेडाबारी–बोटेचौर सडक खण्डमा स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिएको हो । हाल जीर्ण अवस्थामा रहेको उक्त सडक अब भने राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डअनुसार सुधार–विस्तार गर्न लागिएको छ । कालोपत्रे गर्न लागिएको सडक दुई लेनको बनाइँदै छ । अहिले औषत चार मिटर चौडाइ रहेको सडकलाई स्तरोन्नति गरेर नौ मिटर बनाइनेछ । सडकलाई चौडा बनाउन साइड कटिङलगायतका कामहरू धमाधम भइरहेको छ । कटिङसहितको सडकको चौडाइ ११ मिटर हुनेगरी काम थालिएको हो । अहिले भित्ताको माटो काट्ने, साइडलेन, पक्की नाला निर्माण, ग्राबेल, वाललगायतका काम हुँदैछन् । यी सबै कामहरू राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डअनुुसार नै अघि बढाइएको बताइएको छ । सडक स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब ९४ करोड ८४ लाख २३ हजार ६ सय रूपैयाँ लागत अनुुमान गरिएको छ । ठेक्का सम्झौता भने एक अर्ब तीन करोड २३ लाख ७८ हजारमा भएको कार्यालयले जनाएको छ । लागत अनुुमानभन्दा ४१ प्रतिशत कममा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो । स्तरोन्नतिका लागि वि.सं. २०७८ असार २८ गते ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । वि.सं. २०८० पुस २७ सम्ममा स्तरोन्नतिको काम सक्नेगरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ ।
स्तरोन्नति भइरहेको सडक खण्डले पूर्वी सुर्खेतका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूलाई जोेड्छ । स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइए पनि कतिपय काममा भने प्रक्रियागत ढिलाइले असर पुगेको छ । सडक निर्माण क्षेत्रभित्र रहेका एक हजार चार सय रूख काट्नुपर्ने छ । सडकको आफ्नो क्षेत्रभित्र भएपनि सार्वजनिक जग्गामा रहेका रूख कटानका लागि अनुमति आइसकेको छैन । मदन भण्डारी राजमार्ग योजनाले पूर्व मात्रै होइन पश्चिमको सडक समस्याको पनि दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रकाशित मितिः २७ माघ २०७८, बिहीबार ०५:०३